च्याम्पियन्स लिगमा रियल मड्रिड र चेल्सीः आज राती कसले बाजी मार्ला ? - Action Khabar - Nepali Online News Portal
च्याम्पियन्स लिगमा रियल मड्रिड र चेल्सीः आज राती कसले बाजी मार्ला ?
एजेन्सी । युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलको सेमिफाइनल खेलको दोस्रो लेगमा चेल्सी र रियल मड्रिडबीच आज निर्णायक महाभिडन्त हुँदैछ। खेल नेपाली समयअनुसार स्ट्यामफोर्ड ब्रिजमा बुधबार राति १२ः४५ बजे शुरु हुनेछ।
सेमिफाइनल खेलको पहिलो लेगमा दुई टोलीले १–१ गोलको बराबरी खेलेकोमा उक्त खेल रियल मड्रिडको घरेलु मैदानमा भएकोले चेल्सीलाई अवे गोलसँगै घरेलु मैदानको फाइदा छ। यस सिजन दुबै टोलीको प्रर्दशन उत्कृष्ट रहेका कारण खेल रोमाञ्चक तथा प्रतिस्पर्धात्मक हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
चेल्सीका मुख्य प्रशिक्षक थोमस टुचेलले दोस्रो लेगमा आफ्नो टोली केही फाइदामा रहेपनि कडा चुनौतीमा रहेको बताएका छन्। समग्रमा खेलको पहिलो हाफ मात्र सकिएको बताउँदै उनले उच्च लयमा रहेको रियलविरुद्धको खेल टफ हुने बताए।
‘पूरा खेलभरि चुनौती हुनेछ। यो निर्णायक भिडन्त हो, दबाब शुरु भइसकेको छ, टोलीलाई विश्वास र आत्मविश्वासको खाँचो छ,’ उनले भने–‘अन्यथा रियलविरुद्ध हाम्रो लागि मौका रहने छैन।’
यता रियलका मुख्य प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानले चेल्सीविरुद्ध प्रत्येक समय चुनौती रहेको बताएका छन्। ‘उनीहरु उत्कृष्ट छन्, तर हामी जहाँ हुनुपर्ने हो त्यहाँ छौं र त्यसको लायक पनि छौं,’ जिदानले भने। फाइनल पुग्नका लागि आफ्नो टोली सही आकारमा रहेको जानकारी दिँदै उनले टोलीको हौसला बढाएका छन्।
रियल च्याम्पियन्स लिगको सर्वाधिक विजेता हो । उसले अहिलेसम्म किर्तिमानी १३ पल्ट च्याम्पियन लिग जितेको छ । चेल्सीले एक पल्ट सन् २०११–१२ मा च्याम्पियन लिगको उपाधि जितेको छ ।
- २२ बैशाख २०७८, बुधबार २१:४८ मा प्रकाशित